Scrolla Izindaba | Page 405
AmaZulu asezithendeni zeSundowns
Scrolla Africa - 29th Apr 2021 0
Izinga lokushuba kwezinto etafuleni le-DStv Premiership liya ngokhuphuka njengoba AmaZulu evale igebe ngokuthola amaphuzu abasondeze eduze nabaholi be-log iMamelodi Sundowns, esibashiya ngephuzu elilodwa. AmaZulu adlangile athole ukunqoba okukhulu kule sizini njengoba benenebule iCape Town City ngo 5-1 eKapa.
Mhlawumbe kube nezinkulumo ezimbi ezake zamukelwa kuma-Oscars, kepha inkulumo kaDaniel Kaluuya ku-Oscar ngendima yakhe ehlaba umxhwele kwifilimu yangowezi-2021 ethi 'Judas and the Messiah' ithatha indondo yegolide ngokuhlaza umndeni wakhe.
URyan Giggs uyakuphika ukuthi ungumhlukumezi onodlame ozonda abesifazane
URyan Giggs uwaphikile amacala abekwe wona ngabesifazane ababili abathi wabahlasela. Amacala ahlanganisa ukubukela phansi omunye umuntu, ukuhlaza, ukuhlukumeza kanye nokwehlisa isithunzi. UGiggs, umphathi weqembu lebhola likazwelonke lase-Wales, wabekwa icala lokushaya, lokuphoqa kanye nokulawula.
Buyisela izikhwama zakho zemali emuva. I-Arsenal ayithengiswa!
Abanikazi bamaqembu, uStan noJosh Kroenke ngeke bathengise noma iyiphi ingxenye ye-Arsenal Football Club, futhi lokho kugcinile!
Sikwethulela umbiko wethu wezindaba zakwa-Scrolla - ezifundwa nguZuzile Ndlela.
AbakwaGupta bakhokhela amacala abo – kodwa hhayi eNingizimu Afrika
TT2 - 28th Apr 2021 0
Njengoba owayenguMengameli wezwe uJacob Zuma ephelelwa abangani abacebile abajwayele ukukhokhela impilo yakhe yobukhazikhazi noma bakhokhele abammeli abaphezulu ukuze bamumele enkantolo, abakwaGupta bathole izinhlawulo zomthetho e-United Kingdom.
UDJ Khaled ucula noJustin ababili ukwenza i-albhamu ethi-Khaled Khaled
Scrolla Africa - 28th Apr 2021 0
Uma kukhulunywa ngomkhiqizo e-United States, abathandi bomculo abaningi bazokutshela ukuthi eminyakeni embalwa edlule akekho noyedwa oshaya umculi nomdidiyeli owazalelwa e-New Orleans, uDJ Khaled.
Ikhaya elidala kunawo wonke litholakale eNingizimu Afrika
Leli khaya elidala kunawo wonke emhlabeni lakhiwe eNingizimu Afrika, ngokusho komcwaningi wezinto zakudala oyithole oGwadule le-Kalahari.
Sekumzuzu wokugcina wemidlalo ka-Group A emqhudelwaneni we-CAF
Sekumzuzu wokugcina njengoba la maqembu amane aku-Group A esenethuba lokudlulela kuma-quarter-final e-CAF Confederation Cup.
IKaizer Chiefs ibhekene nengcindezi ngemuva kokunqoba kwayo okukhulu
Abaningi sebevele bebikezele ukuthi iKaizer Chiefs ngeke iyishaye iChippa United esezansi kwetafula ngoLwesithathu e-FNB Stadium, e-Soweto.
1...404405406...544Page 405 of 544